आज राति आकाशमा देखिने छ अद्भूत दृश्य : आज राति प्रतिघण्टा ६० देखि एक सयबीचमा उल्कापात खस्नेन ! – Etajakhabar
आज राति आकाशमा देखिने छ अद्भूत दृश्य : आज राति प्रतिघण्टा ६० देखि एक सयबीचमा उल्कापात खस्नेन !
आइतबार राति उल्कापात हुँदैछ। मौसम सफा रहेमा आइतबार राति र सोमबार बिहानसम्म प्रतिघण्टा ६० देखि एक सयबीचमा उल्का खस्ने अनुमान गरिएको छ। केही समयदेखि उल्का खस्ने भएपनि आइतबार राति र सोमबार बिहान यो वर्षको उच्च बिन्दुमा पुग्न लागेको हो। यायती उत्कापात हो।
अाकाश खुला रहे याे उल्कापात काठमाडाैंसहितका ठाउँबाट हेर्न सकिनेछ।एक घण्टामा ५० वटाभन्दा बढी उल्का खसे त्यसलाई उल्कापात भनिन्छ। उल्का आकाशको जताबाटै पनि खस्सेको देखिन्छ। तर आकाशमा धेरै अँध्यरो भएको स्थानतिर हेर्दा राम्रो देखिन्छ। प्रदूषण र प्रकाशको कारण हुने प्रदुषणको कारण खगोलीय गतिविधिमा आकाशमा कम देखिन थालेका छन्।
पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने क्रममा अन्तरीक्षमा रहेका धुलोका कणहरु र चट्टानहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा तीब्र गतिले ठोक्किएर जल्दछन्। यसैलाई हामी उल्कापात भन्दछौं। सूर्यलाई परिक्रममा गर्ने क्रममा १ सय ३३ वर्षअघि पुच्छ्रेतारा स्विफ्ट टटलको छाडेको कणहरु हुन्।
यो अन्तरीक्षमा रहेको स्थानमा साउन महिनाको अन्त्य र भदौको शुरुमा पृथ्वी पुग्छ। सन् २००८ देखि २०१३ सम्म विभिन्न उल्कापात हरुको खिचिएको हजारौ तस्वीरहरुको नासाले गरेको यायती उल्कापात मा अन्य उल्कापात भन्दा चम्किलो देखिने गरेको जनाए छ ।
उल्कापात हुँदा कण र भट्टानहरु प्रति सेकेन्ड ६० किमीको गतिमा बायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने छ। उल्कापात लाई नेपाली जनजिब्रोमा ‘तारा खसेको’ वा ‘तारा पोइल गएको’ पनि भनिन्छ। नेपाल खबर
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २७, २०७५ समय: ४:२२:४५
२ फिट उचाई भएका हसिलो स्वभावका दारी डनले फेसबुकबाट भेटाए ५ फिट अग्ली श्रीमती (भिडियो)
यी हुन् पोखराकी अनुस्का जस्ले जितिन सबैभन्दा सानो १२ बर्षमै स्वर्ण पदक
आफ्नी श्रीमतीको ब्वाइफ्रेन्डको बारे किन थाहा भएन फुटबलर मेस्सीलाई ?
घरको ढोका खोल्दा यदि आवाज आउँछ भने सावधान हुनुहोस्, जान्नुहोस् यस्तो छ कारण